Ny 39,4% kosa no tratran’ny tsifanjariantsakafo mitarazoka. Antom-pisian’ny tetikasa “Confluences HIAKE” (Hetsika Ifandrimbona Amongora ty KEre), ny hampihena izany tsifanjariantsakafo izany any amin’iny Faritra iny. Ny Fikambanana tsy miankina amin’ny Fanjakana, Action Contre la Faim (ACF) no tompon’antoka amin’ity tetikasa ity, raha ny Masoivoho Frantsay ho an’ny Fampandrosoana (AFD) kosa no mpamatsy vola. Firenena 5 no voakasiky ny tetikasa “Confluences” dia i Tchad, Burkina Faso, Cameroun, Repoblikan’i Centre Afrique ary i Madagasikara. Ho an’ny eto amintsika moa, izay nomena ny anarana HIAKE, dia olona miisa 174.400, ao amin’ny distrikan’i Toliara I sy II ary Betioky, samy ao amin’ny Faritra Atsimo Andrefana, no hahazo tombontsoa. Tanjon’ny tetikasa, amin’ny ankapobeny, ny hanatsarana ny fandraisana an-tanana an’ireo tratran’ny tsifanjariantsakafo. Nisy moa ny atrikasa sady fiofanana notontosaina tao Toliara, nandraisan’ireo mpikatroka isan-tokony anjara, toy ny solontenan’ny firaisamonim-pirenena avy any Atsimo Andrefana sy ireo mpikambana ao anatin’ny Champion de la Nutrition de Madagascar (ahitana mpanao gazety avy aty Antananarivo sy any an-toerana, mpanakanto ary mpanao fanatanjahantena). Nandritra izany no namolavolana ny drafitr’asa hotanterahina, hatramin’ny taona 2020, fotoana hifaranan’ity tetikasa HIAKE ity.